कान्ति लोकपथ अ’लपत्र पर्नुका चार कारण । १. सरकारको बेवास्ता : कान्ति लो’कपथ अ’लपत्र पर्नुमा सरकारको बेवास्ता मुख्य कारण हो । सेनाले ०१३ मा ट्रयाक खोल्न सुरु गरेर ०१६ मा सक्यो । तर, त्यसपछि लोकपथ निर्माण कार्य सरकारको प्रा’थमिकतामा नै परेन ।
०५९ मा आएर मात्रै लो’कपथलाई हेटौँडा जोड्ने वै’कल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बहस सुरु भयो । लगत्तै कोरियन सरकारको सहयोगमा सडकको डिपिआर तयार गरियो । तर, काम अघि बढेन । ०६५ मा लो’कपथ निर्माण पुनः बहसमा आयो । ५.५ मिटर चौडाइ रहने भनिएको सडक ८.५ मिटर चौडा बनाउने तय गरियो, तर बजेट विनियोजन गरिएन ।
लोक’पथलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक वर्ष ०७०/७१ बाट मात्रै हो । त्यसयता तीन अर्ब ३६ करोड विनियोजन भइसकेको छ । तर, दुई अर्ब ५८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । लोकपथको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति यही अ’वधिको भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
२. फास्ट ट्र’याक प्राथमिकतामा : सरकारको प्राथमिकतामा ७२.५ किमि लामो काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र’याक निर्माण परेको छ । जसका कारण कान्ति लो’कपथ ओझेलमा छ । २३ कातिक ०६६ देखि सेनाले फास्ट ट्र’याकको ट्र’याक खन्ने काम गरिरहेको छ । यो आयोजना बने काठमाडौंबाट ५९ मिनेटमै निजगढ पुग्न सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, अहिले न फास्ट ट्र’याक निर्माणले गति लिन सकेको छ, न लोकपथको निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
३. सु’रुङमार्गमा जोड : आयोजनाका अनुसार लो’कपथ निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुको अर्को कारण काठमाडौं–हेटौँडा सुरु’ङमार्ग पनि हो । ५८ किमि लामो यो मार्ग हुँदै ४० मिनेटमै काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न सकिने सरकारको भनाइ छ । सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा कुलेखानी–हेटौँडा सु’रुङमार्ग आयोजनालाई दिएको थियो । आयोजनाको डिपिआरसमेत बन्यो । तर, पछि कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेर आयोजना नै अलप’त्र प-यो । सुरुङमार्गका कारण ओझेलमा परेको लोकपथ निर्माण पनि अघि बढेन ।
४. ऐति’हासिक र सांस्कृ’तिक बस्ती : कान्ति लोकपथको पुरानो ‘अला’इन्मेन्ट’ ललितपुरको टी’काभैरव–चापागाउँ–सुनाकोठी बस्तीको बीचबाट थियो । चापागाउँ र सुनाकोठीमा सडकका लागि जग्गा दिनुपर्ने मात्र नभएर घरसमेत भत्कने देखिएपछि स्थानीयले लामो समयसम्म निर्माण कार्यमा अ’वरोध गरे । त्यसैले पछिल्लो समय ललितपुरतर्फको ‘अ’लाइन्मेन्ट’ परिवर्तन गरिएको छ ।
जसअनुसार लोकपथ टीकाभैरवबाट छम्पी हुँदै भैँसेपाटीबाट एकान्त’कुनामा जोडिनेछ । त्यसैले सुनाकोठी र चापागाउँको बस्ती जोगिने भएको छ ।ललितपुरको सातदोबाटोदेखि मकवानपुरको हेटौँडा जोड्ने कान्ति लोकपथ निर्माण थालिएको ६४ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माणमा अ’हिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने हिसा’बसमेत सरकारसँग छैन ।
सडक निर्माणका लागि सेनाको नेतृत्वमा ०१३ मा ट्रयाक खन्न सुरु गरिएको थियो । यो काम ०१६ मा सकियो । त्यतिवेलै ट्र्या’क उ’द्घाटन गर्दै राजा महेन्द्र हेटौँडाको बु’द्धचोकदेखि जिपमा ललितपुरको टीकाभैरवसम्म आएका थिए । राजा महेन्द्रले कान्ति लोकपथको उ’द्घाटन गरेको शि’लालेख ठिंगन खण्डको सडकको भित्तामा अहिले पनि देखिन्छ । तर, त्यसयता सडकको स्त’रोन्नतिको काम कछुवा गतिमा समेत हुन सकेन ।
६४ वर्षमा आयोजनाका नाममा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । तर, त्यसको विवरण पनि सरकारसँग छैन । काठमाडौंस्थित कान्ति लोकपथ सडक आयोजनाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ यता मात्रै दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसअघि भएको खर्चको विवरण न आयोजनासँग छ, न सडक विभागसँग नै ।
‘ट्रयाक खन्ने काम ०१६ मै सकिएको देखिन्छ । तर, सडक निर्माणको काम अझै हुन सकेको छैन । आयोजनामा पछिल्लो समय भएको खर्च विवरण त होला, तर पहिला कति भयो त्यसको हिसाब नै छैन,’ आयोजना कार्यालयका पूर्वप्रमुख कपिलविष्णु काफ्लेले भने ।
लोकपथको कुल लम्बाइ ९० किमि थियो । सडकको चौडाइ सुरुमा ५.५ मिटर तय भएको थियो । तर, पछि ८.५ मिटर निर्धा’रण गरिएको छ । लोकपथको ५१ किमि भाग मकवानपुरमा र बाँकी ३९ किमि खण्ड ललितपुरमा पर्छ । मकवानपुरको चौघडा–चुनडाँडा–मकवानपुरगढी–जितपुर–ठिंगना–बागमती हुँदै लोकपथ ललितपुरको बगुवा–कल्चेभिर–छपेली–झाँ’क्रीडाँडा–तिनपाने भञ्ज्या’ङ–टीकाभै’रव हुँदै सातदोबाटोमा जोडिन्छ ।
निर्माण भएको सडकका विभिन्न खण्ड पनि बर्खाको बा’ढीप’हिरोले क्षतविक्षत हुने गरेका छन् । कहीँ सडक धस्सिएको छ भने कतै पहिरोले बगाएको छ । कुनै ठाउँ पहिरोका कारण सडक पुरिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छैनन् ।
आयोजनाका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ । सडक विभागले टेन्डर निकाल्छ । तर, डोजर लिएर ठेकेदारले उही ढि’स्कोलाई कहिले यता पन्छाउँछन् त कहिले उता । दशकौँदेखि चल्दै आएको यो प्रक्रियाले सीमित ठेकेदारको मु’हारमा त पटक–पटक कान्ति ल्याएको छ । तर, सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।
कान्ति लोकपथ निर्माण भए हेटौँडा–काठमाडौं दूरी एक सय ३२ किमि छोटिन्छ । अहिले मुख्यतया सञ्चालनमा रहेको हेटौँडा–नारायणगढ–मुग्लिन–नाग’ढुंगा सडकको लम्बाइ दुई सय २२ किमि छ । कान्ति लोकपथ निर्माण भए ९० किमि यात्रामै काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । समय र इन्धन दुवैको बचत हुन्छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेको भए कान्ति लोकपथलाई नै ‘फास्ट ट्रयाक’का रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था पनि थियो । यसका लागि लोकपथको साबिक रुटलाई मकवानपुरको ठिंगनबाट निजगढ जोड्नुपर्ने हुन्थ्यो । ललितपुरको सातदोबाटोदेखि निजगढसम्म यो रुटको दू’री ८० किमि मात्रै हुन्छ । तर, ६४ वर्ष पुरानो लोकपथलाई उपेक्षा गरेर सरकारले फास्ट ट्र्याकमा मात्र अन्धाधुन्ध पैसा खन्याइरहेको छ । ९० किलोमिटर लामो कान्ति लोकपथको समानान्तर ७२.५ किलोमिटर फास्ट ट्रया’क निर्माण भइरहेको छ । तर, कुनै पनि सडकको निर्माण फास्ट ट्र’याकमा छैन ।
राज्यले नै प्राथमिकतामा नराखेका कारण राजा महेन्द्रले ६ दशकअघि नै जिप कुदाएको कान्ति लोकपथमा अहिले दूध बोक्ने एक–दुईवटा ट्रक र फा’ट्टफुट्ट मिनिबस मात्रै चलेको देखिन्छ । सरकारको प्राथमिकतामै नपरेर आयोजनाको यस्तो दुर्गति भएको आयोजनाका पूर्वप्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । ‘राजा महेन्द्रले उतिवेलै जिपबाट सकुशल पार गरेका थिए कान्ति लोकपथ । अहिले त्यही सडकमा एक–दुईवटा ट्रक घस्रिएको देख्न पाउँछौँ । कान्तिभन्दा पछि बनेका सडक सञ्चालनमा आएर पनि पुराना भइसके,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकतामै नपरेर यस्तो भएको हो ।’
भट्टेडाँडा खण्डको सडक हरेक वर्ष पहिरोले बगाउँछ, हिउँदमा डोजरले पहिरो हटाउँछ । त्यसैको ट्र्या’क पहिल्याउँदै दूध बोक्ने ट्रक र मिनिबस भिरमा घिस्रन्छन् । ‘चक्का मात्रै अडिने सडक छ । माथि पनि भिर, तल झन् ठूलो भिर । एउटा चक्का मात्रै तलमाथि भयो भने बाँच्ने आस कसैको हुन्न । यो भिरमा गाडी हिँ’ड्यो कि आङै सि’रिंग हुन्छ । तर, हामीसँग रमिता हेर्नेबाहेक अरू उपाय पनि छैन,’ बागमती–
सडक निर्माणका लागि सेनाको नेतृत्वमा ०१३ सालमा ट्र्या’क खन्न सुरु गरिएको थियो । यो काम ०१६ मा सकियो । त्यतिवेलै ट्र्याक उ’द्घाटन गर्दै राजा महेन्द्र हेटौँडाको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको टीकाभैर’वसम्म जिपमा आएका थिए । राजा महेन्द्रले कान्ति लोकपथको उ’द्घाटन गरेको शिलालेख ठिंग’न खण्डको सडकको भित्तामा अहिले पनि देखिन्छ ।
२०७७ चैत्र ३०, सोमबार २०:५१ गते 1 Minute 263 Views